🥇 ▷ Eeg hagaajinta Huawei Mate X 5G chipset-ka lagu arkay IFA 2019 ✅
Eeg hagaajinta Huawei Mate X 5G chipset-ka lagu arkay IFA 2019
Udub dhexaadka Huawei Mate 30 Pro iyo laablaabka Mate X ayaa noqon doona 5ta chipset cusub ee la buuxiyay, waxaana markii ugu horreysay lagu arkay IFA 2019 show toddobaadkan.
Kirin 990 chipset uu soo saaray Huawei wuxuu ka muuqday bananbaxyada xarunta shirku oo aan sifiican u muuqan oo lagu sawiray indho fiiqan. Twitterka isticmaalaha Roland Quandt.
Huawei wuxuu leeyahay mustaqbal aan la hubin sababta oo ah mamnuucista Huawei ee Mareykanka, laakiin wali waxay horay ugu sii socotaa tikniyoolajiyad cusub, sida uu caddeeyay Kirin 990 chipset. Waxaan hore u ogaynay Kirin 990 markii Huawei uu xaqiijiyay inay taageeri doonto Mate X.
Waa kuwan calaamadaha:
Huawei # Kirin990 # IFA2019 pic.twitter.com/gGQNwoDHItSeptember 4, 2019
Calaamadu waxay xustay in Kirin 990 chipset-ka uu lahaan doono awood 5G oo aan caadi aheyn. Tani waxay ka dhigan tahay inaan loo baahnayn modem 5G oo dibadda ah marka lagu daro chipset-ka. Cuntadan waxaa sidoo kale lagu dhisay 7nm FinFET Plus nashqadeeyaal ah oo u adeegsada iftiinka ultraviolet-ka xad dhaafka ah, cufnaanta, naqshadeynta tamarta tamarta.
Si kastaba ha noqotee, waxaa horey loo sii maleynayay in taleefanka xiga ee Huawei uu heli doono Kirin 985 chipset. Hadda, tani meesha kama saarin suurtagalnimadaas. Haddii Huawei uu doorto inuu ku bixiyo kala duwanaanshaha 5G iyo 4G-LTE keliya taleefanka gacantu xiga, ka dib Huawei wuxuu u isticmaali karaa midab kala duwan midba midka kale.
Isagu ma ahan ciyaaryahanka kaliya
In kasta oo warkan laga yaabo inuu xiiseeyo taageerayaasha Huawei ee bartilmaameedsanaya mustaqbalka Huawei P40 ama soo socda ee Mate X, Huawei maahan shirkadda kaliya ee u beddela jaan-gooyada leh awooda 5G ee lagu dhisay.
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday Exynos 980 chipset, oo sidoo kale yeelan doona modem 5G ah. Iyo, waa inay noqotaa wax soo saar ballaaran dhamaadka sanadkaan iyo dhulka Samsung. Galaxy S11
Si kastaba ha noqotee, Huawei Kirin 990 ayaa loo badinayaa inuu ka muuqdo aaladda heerka sare ah. Marka waxaa laga yaabaa in ka badan chipsets Premium. Samsung Exynos 980 chipset waxay umuuqataa inay leedahay tafaasiil muujinaya inay sifiican uga dhigi doonto wadnaha taleefanka dhexe 5G.
Si kastaba ha noqotee, Huawei ayay u badan tahay inuu noqon doono kan ugu horreeya ee suuq geeya. Mate 30 Pro waxaa loo qorsheeyay in la bilaabo Sebtember 19-keeda, waxayna noqon lahayd shaashad xun in Huawei ay kor u qaaddo awooddeeda cusub ka hor inta aan la furin taleefanka gacanta kaas oo lagu dhisay wax intaas ka yar.
Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato 5G